Lalàm-pifidianana manjavozavo Hararaotin-dRajoelina hanaovana propagandy
Fiara lafo vidin-dRajoelina Iza no nandoa ny vola ?
Niteraka resabe sy fanehoan-kevitra maro ny fiara tsara tarehy nitondra ny filoha vaovao Andry Rajoelina nandritra ny fianianana tetsy Mahamasina ny sabotsy 19 desambra lasa teo.
Olon`ny Freedom Tsy nanisy hasiny an`ireo Tangalamena
Lanonana hafahafa. Nandritra ny lanonam-panjakana teny Iavoloha dia efa niseho nilay sahady ny olon-dRajoelina. Hailika tsy hahazo laka sahady ve ny hafa ?
Marc Ravalomanana Vao mainka mamim-bahoaka
Fihetsika feno fanajana sy fankasitrahana no nandraisan’ny vahoaka an’i Marc Ravalomanana nandritra ny lanonam-pianianan’ny filohan’ny Repoblika vaovao Andry Nirina Rajoelina tetsy amin’ny Kianjaben’i Mahamasina ny sabotsy 19 janoary lasa teo.
Fianianana Sambany no nisy Matso
Amin`ny maha filoha faratampony amin`ny foloalindahy azy dia nisafo ny andian-tafika ny filoham-pirenena vaovao ary nisy taorian`izay ny fanomezam-boninahitra ny fanevam-pirenena.
Lahateny voalohan’ny filoha Mba tsy ho kobaka am-bava intsony…
Fotoan-dehibe ho an`ny firenena ny lanonana fianianana ary ny fanolorana samboady sy mariboninahitra, saingy ny tena andrasan`ny besinimaro ny lahateny voalohany ny filoha vaovao.
Fihetsika atao mialoha ny fampielezan-kevitra ny atao hoe “pré campagne”, izany hoe fiomanana mialoha ny tena fampielezan-kevitra.
Tsy voaresaka ao anatin`ny didy aman-dalàna mifehy ny fifidianana io na dia efa nanao fanamarihana aza ny teo anivon`ny CENI mba tsy hampisy ny fisavoritahana ka aleo faritana ao anatin`ny didy aman-dalàna ny fihetsika mialoha ny fampielezan-kevitra. Misy kosa ny fenitra iraisam-pirenena manazava azy io, araka ny nambaran`ny teo anivon`ny CENI. Zavatra telo no azo hatao mandritra izany, dia ny filazana ny fanambarana amin`ny vahoaka fa ho kandidà hilatsaka hofidiana afaka mitety faritra, manetsiketsika sy manangana ny antoko na fikambanana izay hanohanana sy hanampy amin`ny vanim-potoana tena hanaovana ny fampielezan-kevitra amin`ny fifidianana ary ny fitetezam-paritra hahafahana manazava ny vinam-piarahamonina hitondrana ny fampandrosoana na “Projet de société”. Tafiditra ao ny fanomanan`ny kandidà iray amin`ny fifidianana. Tsy mbola azon’ny kandidà iray atao kosa ny manentana ny olona hifidy azy na mitaona ny olona tsy hifidy. Fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana mantsy izany ka voarara. Raha dinihana sy jerena akaiky anefa ny fihetsika, ny fiteny, ny fanomezana toky fa hanao an’izatsy sy izaroa, ny fomba ataon`ny filohan`ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina mandritra ny fitetezam-paritra ataony amin`ny fampahafantarana ny vinan`asa Initiative Emergence Madagascar (IEM) dia efa miendrika fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana ary nohararaotiny ny mampajavozavo ny lalàna misy eto Madagasikara momba ny fifidianana.